Ii-eReaders kunye nee-ebook: Konke malunga nokufunda kwidijithali kunye nokufunda nge-elektroniki | Zonke iiReaders
Abafundi: abafundi be-elektroniki
Sibanye iwebhusayithi ekhethekileyo yabafundi kunye nokufunda kwidijithali. Sihlalutya kwaye sivavanye zonke iimodeli ezikhoyo kwintengiso kwaye sikuxelela ngamandla abo kunye nobuthathaka babo.
Oyena mfundi utyayo?
Umbuzo weklasikhi. Ukuba ufuna ukuya ngqo kwinqanaba, sicebisa 2.
Iindaba zeblogi zamva nje
Ukuba ufuna ukuhlala usesikhathini, ezi ziindaba zamva nje esizipapashile ezi ziindaba zamva nje ezivela kwiimpawu zentengiso kunye nehlabathi upapasho lwedijithali kunye nokufunda kwifomathi ye-elektroniki.
Kindle Paperwhite (2021) - Uphononongo
I-SPC Dickens Light Pro-Indlela elungileyo engabizi kakhulu [Uhlalutyo]
Kobo Sage, ukubheja ngeaudiobooks kunye nestylus [Uhlalutyo]
Uphengululo lwazo zonke izixhobo
Sivavanya kwaye sihlalutya i-e-reader nganye kakuhle, iiveki, ukuxelela ukuba ngawaphi amava okwenyani okusebenzisa isixhobo ngasinye.
Inqaku lethu elomeleleyo kukuba sivavanye uninzi kangangokuba sinokuthelekisa kwaye sikuxelele amandla kunye nobuthathaka bento nganye ngokuthelekiswa nokhuphiswano lwayo.
Amazon Kindle, iinkampani, I-eReaders, isibulali
Konke malunga neAmazon kunye nohlobo lwakho
Ayinakuphikiswa loo nto Uhlobo lwezixhobo ezisetyenziswa kakhulu ngabafundi namhlanje. Ke sikushiya le Uhlobo olukhethekileyo, kunye nezifundo ezininzi kunye namaqhinga ukuze ufumane olona phawu lukhulu kwi-ebook yakho yeAmazon.
Uyenza njani i-Kindle's browser yewebhu ukuba ihambe ngokukhawuleza (kwaye kutheni ungayenzi)
Uluhlaziya kanjani uhlobo lwethu ngesandla
Isifundo: khuphela iincwadi ze-Kindle app ezifumanekayo kwizixhobo zefowuni kunye neetafile
Ukuba ujonge ukuthenga i-ereader ulwazi olulandelayo kunye ne uthelekiso lwabafundi iyakukunceda
Oyena mntu ufundayo kumgangatho- wexabiso
Ukuba sithetha ngexabiso lemali, siyaqhubeka nokucebisa i-Kindle Paperwhite njengoyena mntu ufunda kakuhle
Ukuba ufuna ukuphonononga iimodeli ezinomdla ezikwiimarike ngoku, jonga kwezi sizicebisayo
Ukuthelekiswa kweyona eReaders ibalaseleyo
Imemori / Iyandiswa
Uhlobo lweWebhuwwhite 6" 300dpi Ewe Ewe 4Gb / Hayi 129.99 €
UKobo Aura H2O 6'8 " 300dpi Ewe Ewe 4Gb / Ewe 201 €
I-Sony PRS-T3 Tamaño 300dpi Hayi Ewe 2Gb / Ewe 222 €
Uhlobo 4 6" 166dpi Hayi Ewe 4GbAkukho 79.99 €
UKobo Aura One Tamaño 300dpi Ewe Ewe 8Gb / Ewe 227 €
Bq Izibonelelo 3 6" 300dpi Ewe Ewe 8Gb / ewe 139.90 €
Uhlobo lohambo 6" 300dpi Ewe Ewe 4Gb / Hayi 189.99 €
Uhlobo lweOasis 6" 300dpi Ewe Ewe 4Gb / Hayi 289.99 €
Yintoni ebalulekileyo kwi-ereader / ebook
Iminyaka iyahamba kwaye abafundayo bayadityaniswa kwaye bayaphuculwa izixhobo.Iimpawu ezazisenziwa kwiminyaka eyadlulayo ukuvavanya ukuba yeyiphi i-e-reader emayithengwe etshintshileyo. Ke namhlanje ukukhanyisa kuphantse kube luxanduva, ngelixa kwiminyaka embalwa edlulileyo khange sicinge ukuba inokuba njalo.
Ke, kufuneka sijonge ntoni kwi-2019 ukuba sifuna ukuthenga okanye ukukhetha i-ereader?
Njengakuyo yonke into, kufuneka sigcine engqondweni injongo yokufuna ukuyinika.
Ubungakanani besikrini kunye nesisombululo
Ubungakanani bescreen sabafundi beklasikhi bahlala be-6 ″ kwaye uninzi lweemodeli ezikhoyo ngoku ziyaqhubeka nobungakanani. Kodwa baninzi abafundi abatsha abafunda, abanezikrini ezi-8 no-10 ″.
I-6-ereader iyalawuleka kwaye kulula ukuhambisa. inobunzima obungaphantsi xa sibubambile. Kodwa i-10 if enye ukuba asihambisani nayo isinika amava amnandi kakhulu.
Ngokuphathelene nesisombululo okwangoku abafundi abaphambili kakhulu basebenza nge-300 dpi (iipikseli nge-intshi) kunye nezinye ezisisiseko nge-166 dpi. Kule meko kokukhona kulunge ngakumbi kuba siya kufumana inkcazo engcono
Luphawu lwamva nje okanye ukusebenza okongezwe kwabafundi be-e. Ingenza umahluko ekuthengeni kwakho. Ukukhanya okungalunganga kuya kudala izithunzi kwaye kukunikeze amava okufunda kakubi.
I-ereaders enokukhanya kulapha ukuhlala, kulungile bafika kwakudala, kodwa ngoku nayiphi na i-ebook esisiseko sele iyifaka. Iimpawu ezinkulu zibeke ngokungagqibekanga kwaye ezincinci ukukhuphisana azinakho enye indlela kodwa ukuyifaka kuzo zonke iimodeli zazo.
Ukukhanyisa yenye yezinto ezenza ukuba ibhetri ereader ibufutshane.
Kwinqanaba lenkqubo yokusebenza, bahlukaniswe ngokwamaqela ama-2, lawo ane-software yawo kunye nalawo asebenzisa i-Android, nolunye lophuhliso lwamva nje oluninzi lweempawu ezijoyinayo.
Kude kube ngoku umntu ngamnye ofundayo usebenze kunye nesoftware yakhe, i-Kindle kunye neKobo ipolishiwe kwaye inobuhlobo kwaye ityibilika kakhulu. Kodwa kangangexesha elithile kwaye ngakumbi kwimveliso ezingaziwayo baqale ukusebenzisa i-Android ebavumela (ukuba bayayiqhuba kakuhle) ukubamba iimveliso ezinkulu malunga noku.
Izibonelelo ze-Android kwisihambisi-zincwadi zininzi:
Singafaka inani elikhulu lezicelo ezonyusa imisebenzi kunye namathuba omfundi wethu. Ukuyifunda kunye nokuyifunda kamva izicelo ezinje nge-Getpocket, Instapaper, njl. Singakwazi nokufaka ii-Kindle kunye neeKobo zokusebenza kunye nokufikelela kwiiakhawunti zethu kula maqonga.
Into ekufuneka siyilumkele kukutyibilika. I-Andorid kwi-ereader enamandla amancinci, baya kwiijerks kwaye kusenza sibe namava angathandekiyo kuthi.
Kodwa ikamva leemveliso ezininzi liza kuba kunye ne-Android ukuze ikwazi ukukhuphisana nezo zinkulu.
Eyona Brands iphambili xa sithetha ngabafundi bokufunda, ezona zibalaseleyo kumgangatho wazo nakwinkqubo yezendalo I-Amazon Kindle y Kobo nguRakuten.
Ke zininzi ezinye iiNook, iTagus, Tolia, BQ, Sony, Likbook, iOnyx. Sinamacandelo akhethekileyo kulowo nalowo kubo kwaye sifuna ukuba ufumanise ukuba angakunika ntoni na ngamnye kubo.